LandViewer: yokwenene-ixesha lomhlaba lokujonga umfanekiso wohlalutyo kwisikhangeli sakho-iGeofumadas
ubonwa Uhlalutyo Earth umfanekiso ngexesha lenene kwibrawuza: LandViewer
Agasti, 2017 Okufumaneka, Geospatial - GIS, ezintsha
Iinkcukacha zesayensi, iinjongo ze-GIS kunye nabaphuhlisi beekhompyutha EOS, A inkampani esekelwe e-California, kutshanje usungule ophambili isixhobo ilifu-based evumela abasebenzisi, iintatheli, abaphandi kunye abafundi bafune nokuhlalutya imali ze data ze Earth data mkhanya.
I-LandViewer yinkonzo yenkcazelo yangempela kunye nokuhlalutya inkonzo enikezelayo:
Ukufikelela ngokukhawuleza kwipetabytes yolwazi olutsha kunye nolwazi;
ithuba lokufumana imifanekiso ye-geospatial nganoma yiliphi izinga kunye nokuchofoza ezimbini, ngokukhetha indawo efunwayo kwimephu okanye ngegama lendawo;
Uhlalutyo lwamaxesha wangempela, kunye nenketho yokukhuphela imifanekiso efunwayo ngenjongo zorhwebo.
Isisombululo se-EOS senza ukuba abasebenzisi bakwazi ukwenza imibuzo emininzi, bafumane kwaye basebenzise nayiphi na imifanekiso yokujonga umhlaba efumaneka kwi-Sentinel 2 kunye ne-Landsat 8 satellites kwindawo enye kwaye ngokukhawuleza okukhulu kunangaphambili. Yinkonzo yasimahla, ekulula ukuyisebenzisa kwaye enokufikelelwa kuso nasiphi na isikhangeli okanye isixhobo.
Ngenxa LandViewer, abasebenzisi ukuhlola imifanekiso yesatellite Sentinel 2 kunye Landsat 8 agcinwe kwi iqonga Amazon Cloud, isicelo izihluzi wophendlo ngomhla image, inqanaba neengqimba okanye ukuphakama kwelanga, ukuhlalutya imifanekiso, khuphela kwaye uwabelane nabanye.
Ukusebenzisa iteknoloji yokuvelisa i-mosaic, i-LandViewer iyakwazi ukufumana izigcawu ezivela kwifayile yefayile kunye naluphi na ukongezwa ngaphantsi kwemizuzwana ye-10. Imifanekiso ingabonwa nendibaniselwano ezahlukeneyo bands okanye i-time real isalathisi ecacicleyo njengoko NVDI ezikhethiweyo ukunika ulwazi olufanele efanele iimfuno lomsebenzisi. Ukuze oku kwenzeke, iingcali eos baye iteknoloji esiguqula imifanekiso data satellite ekrwada-time real lugcinwe kwifomati GeoTIFF 16 bit tesserae, umsebenzisi uyakwazi ukubona ngoko nangoko kwi browser window . Akukho mfuneko ukwenza kunye neefestile ukugcina imbonakalo kwi ibrawuza okanye ugcino data, ekubeni mifanekiso lizakuboniswa ngoku ibrawuza esuka data lokuqala.
Umsebenzisi angasebenzisa inhlanganisela emininzi yee-band efakwe ngaphambili kunye nee-spectral ezenzelwe ukugqamisa nokujonga ngedatha kwanoma yimuphi uhlobo kumfanekiso. Umzekelo, imililo yamahlathi ibonakala lula kwi-infrared spectrum. Kukho amaqela amaninzi afumaneka ukuhlalutya izityalo, umhlaba wezolimo, amaqhwa, imilambo, amachibi kunye nolwandle. Abasebenzisi ayisebenzise zonke izinto umboniso, umzekelo, ezo zinxulumene imililo, izikhukula, ukungena ngokungekho mthethweni kunye nolawulo lwezibonelelo zamanzi ngokweenkcukacha. kwakhona uthelekise imifanekiso ngokulandelelana geospatial ka 2014, 2015, 2016 kunye 2017 ukuchonga utshintsho kuphuhliso olungaselunxwemeni, amahlathi kunye nezinye izinto zendalo.
Ngomhla kaFebruwari we-2017, iigososayensi zase-Israel zasetyenziswa LandViewer kwiphando lwabo kwaye bakhupha i-bathymetry efunyenwe yi-satelithi ekudaleni imephu yegridi ye-100 m ukusuka kwi-peninsula yase-Arabia. Iingcali ze-GIS nazo zenza uhlalutyo lwamanzi aluhlaza usebenzisa imifanekiso engcono (ngaphandle kwamaza, kunye nomoya ococekileyo, ukubonakala kakuhle kwe-bathymetry yangempela, njl.) Efumaneka kwi-LandViewer.
"Kwi-2017, i-EOS iya kubonisa intlalo yoluntu kunye nentengiso yoluntu kwiplanethi," kusho umsunguli we-EOS kunye no-CEO uMax Polyakov. Enyanisweni, inkampani inokwakhekhnoloji enamandla kunazo zonke ekusebenziseni imifanekiso yokude, xa i-EOS yokugcina idibanisa idatha evela kwimithombo emininzi: i-satellites, umoya kunye neenqwelo zomoya ezingabanjwanga. Ukususela ngoku, abasebenzisi banokufikelela kwiinkcukacha zobugcisa bokuhlalutya imifanekiso esekelwe kwifu, iindlela ezisekelwe kumanethiwekhi angama-neural, amanqaku efu - i-photogrammetry, ukutshintsha ukutshintshwa, kunye nokuveliswa kwemifanekiso.
Zama LandViewer okanye qhagamshelana neqela ngolwazi olungakumbi: info@eosda.com
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ngaba ichanekile, injongo-exhomekeke kwi-cadastre-imeko, ulungelelwaniso, ubuchule, okanye ububhanxa?
Post Next Namathisela ispredishithi kwi-AutoCAD, ehlaziywa ngokuzenzekelayoOkulandelayo »
2 Iimpendulo kwi "LandViewer: uhlalutyo lwexesha lokwenyani lokujonga imifanekiso yomhlaba kwisikhangeli sakho"
trần hùng uthi:
Rat quang mtv Quan Lý Đông cho hoạt ufike, Nhung dịch cho Han Chế vu mien phi, njani cho mien phi MO Rong Yêu Cơ bản Nhung Van
Unomdla kakhulu ngala maxwebhu kumsebenzi wobugcisa we-Geologist